सरकारी अस्पताल: कागजमा निःशुल्क, व्यवहारमा सशुल्क - VOICE OF NEPAL
१ असार २०७६, आईतवार ०१:२४ 160 ??? ???????
उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीलाई सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालले अटेरी गर्दै आएका छन् । संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि ती अस्पतालबाट बिरामीले सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन् ।
–कम्पनीपिच्छे औषधिको मूल्य फरक
—बजेट नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती
यस्तै, फार्मेसीपिच्छे औषधिको मूल्य फरक–फरक छ । वीर अस्पतालको फार्मेसीले पनि सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेका औषधिको पैसा लिइरहेको छ । अस्पताल प्रशासनले फार्मेसीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन निर्देशन नदिएपछि शुल्क लिएको फार्मेसी अधिकृत श्याम मण्डलले बताए । उनले भने, ‘मेडिकल स्टोरबाट डाइरेक्ट वार्डमा निःशुल्क औषधि जान्छ । हामीलाई वितरण गर्न अनुमति छैन ।’
यस्तै, कीर्तिपुर अस्पतालले पनि गरिब र असहाय बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसकेको पाइएको छ । अस्पतालमा आउने कुल बिरामी संख्याको १० प्रतिशत अति गरिब र असहाय बिरामीलाई निःशुल्क औषधिसहितको उपचार गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सो अस्पतालले अति गरिब, असहाय बिरामीलाई औषधि नदिएको पाइएको छ । अस्पतालका फार्मेसी सुपरभाइजर पंकज भट्टले स्वास्थ्य शिविरमार्फत निःशुल्क औषधि सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको बताए । ‘निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर तोकिएका औषधि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन,’ उनले भने ।
अस्पतालबाट २०७६ जेठमा ४ सय ४१ जना बिरामीले सेवा लिएका थिए । जसमध्ये १८ जनालाई छुट उपलब्ध गराइएको अस्पतालको काउन्टर शाखाले जनाएको छ । सरकारबाट प्रदान गरिने निःशुल्क औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको सूची सबैले देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रायः अस्पतालले यो प्रावधान अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले ५० बेड माथिका अस्पतालमा औषधि खरिदका लागि बजेट नगएको बताए । उनले भने, ‘झन्डै एक अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । औषधि खरिदका लागि बजेट नै नजाँदा तोकिएका निःशुल्क औषधिबापतको रकम पनि बिरामीबाट लिने गरेका हुन सक्छन् ।’
सरकारले तीन वर्षअघि ९६ किसिमका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । उपभोक्ता अधिकारकर्मी बाबुराम हुमागाईंले सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेका औषधि बिरामीले सहज तरिकाले पाउन नसकेको स्विकार्छन् । हुमागाईंले भने, ‘उपभोक्ताले पनि माग गर्नुपयो । सरकारले पनि वाचा पूरा गर्नुपयो ।’